रमण रेग्मीको घर त लगनखेल | Sima Pari
Home / Entertainment / रमण रेग्मीको घर त लगनखेल
पन्ध्र वर्ष देखि नेपाली संगीत मा अनबरत रुपमा लाग्दै आइरहेका सिड्नी निवासी गायक रमण रेग्मीको नया प्रस्तुति “घर त लगनखेल ” भर्खरै बजारमा आएको छ। यो गितले राम्रै चर्चा पाइरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा गायक रमण रेग्मीसँग गरिएको भलाकुसारी ।
संगीत तिर कसरि लाग्नु भयो ?
मलाई संगीतप्रति सानै देखि लगाव थियो। सानै देखि विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरुमा भाग लिदै डोरेमी संगीत पाठशालामा सास्त्रीय संगीत को अध्ययन पनि गरे। त्यसैताका २०६२ सालमा अहिलेका सफल गीतकार देव दत्त भट्टले लक्ष्मण शेषको संगीत रहेको “भोगाइ” एल्बममा गीत गाउने अवसर प्रदान गर्नु भयो ।
त्यसपछि २०६३ साल तिर संगीत को अध्यापन पनि गर्न थाले।
पहिलो एल्बमको अनुभब कस्तो रह्यो त ?
२०६४ सालमा आफ्नै एकल अल्बम “समर्पण” नेपाली श्रोता माझ पस्कने अवसर पाएको पाएँ । “समर्पण” मा नेपाल का बरिस्ठ रचनाकार अनि संगीतकारको सिर्जना समाबेस गर्ने अवसर पाएको थिए। तर अल्बम बजारमा आए लगत्तै अध्ययनको सिलसिलाम़ा अस्ट्रेलिया तिर आइयो जसको कारण मैले आफ्नो पहिलो एल्बमको राम्रो संग प्रचार प्रसार गर्न सकिन । “हुन्छ नि बैंशमा मुटु साटौ लाग्ने” बोलको गीतको भीडियो पनि बनेको थियो र यो गीतले राम्रै चर्चा पाएको थियो।
संगीतमा बिश्राम नै लिनुभयो नि?
अस्ट्रेलिया बसाई को क्रम मा धेरै आरोह अबरोह जीवनमा आए जसले गर्दा नचाहदा नचाहदै लामो समय करिब ७ वर्ष जति संगीतलाई साइडमा राख्न बाध्य भएँ। तर बेला मौकामा अस्ट्रेलियामा हुने सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहन्थे । तर अहिले पाएसम्म संगीतमा फेरी सक्रियतापुर्वक लाग्ने बिचार गरेको छु ।
तपाइको अहिलेको नया प्रस्तुतिबारे बताइदिनुस न ?
पुरानो पुस्ताले निकै रुचाएको गीत ‘घर त लगनखेल’ लाई रिमिक्स गर्ने अवसर पाएको छु। यो गीतलाई हाम्रा पपुलर गायक मधु छेत्री ले गाउनु भएको थियो । यो गीत लाइ मैले सके सम्म न्याय गर्ने प्रयास गरेको छु। आधुनिक शैलीले यसलाई एरेन्ज गरिएकोले यो गित नया पुस्ता र पुराना पुस्ता दुबैले रुचाउनेमा म ढुक्क छु। साथै यसको म्युजिक भिडियो पनि उत्कृष्ट बनेको छ । यसका लागि अहिलेका पपुलर डाइरेक्टर प्रसन्न पौडेललाइ धन्यबाद दिन चाहन्छु । यस भिडिओका मोडल पुस्कर रेग्मी र सुचित्रा आचार्यले पनि राम्रो मेहनत गर्नु भएको छ।
अहिले दर्शक बाट राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाइरहेको छु मलाई आशा छ मेरा दर्शकहरुले मेरो यो गीत मन पराइ मलाई माया गरिरहनु हुने छ । यो गीत रेकर्डिङ्ग र भिडियो निर्माणमा मलाई आफ्नो संगीतको अभिभाबकको रुपमा सहयोग गर्नु हुने मेरा आदरणीय दाई लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकाल प्रति धेरै आभारी छु। र सम्पूर्ण मेरा शुभ चिन्तक अनि मिडिया प्रति सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। अन्त्यमा यो गीतलाई माया गरिदिनुस भन्न चाहन्छु। जय गीत जय संगीत !!!
Previous: भब्यरुपमा सिड्नीमा नेपाल महोत्सव सम्पन्न
Next: पेट्रोलको खुलेआम कालोबजारी